Rajaonarimampianina Hery:« FENO NY FEPETRA IALAN’NY VAHOAKA ANATY FAHANTRANA » -
AccueilRaharaham-pirenenaRajaonarimampianina Hery:« FENO NY FEPETRA IALAN’NY VAHOAKA ANATY FAHANTRANA »
07/01/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Maro ny zavatra vitan’ny fitondram-panjakana tamin’ny taon-dasa ary hita taratra tamin’ny fiainam-bahoaka izany satria taonan’ny asa ny taona 2016. Ary nanamafy izany ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, nandritra ny lahateny nataony omaly teny Iavoloha tamin’ny fifampiarahabana tratry ny taona 2017. Nambarany fa nisy ny dingana natao ary nisy ny ezaka teo amin’ny fanatsaram-pitantanana amin’ny ankapobeny entina hampandrosoana ny fiainam-bahoaka sy ny firenena. Ary niaiky izany ireo fikambanana iraisam-pirenena raha araka ny filazan’ny Filoha nanao hoe « Niara-niaiky ny fikambanana iraisam-pirenena fa feno ny fepetra rehetra ialan’ny vahoaka malagasy ao anatin’ny fahasahiranana sy fahantrana amin’ity taona 2017 ity. Ary tonga ny fotoana hampanjariana ho vokatra ny harena eto Madagasikara sy ny fahavononan’ny malagasy ialana amin’izany fahantrana izany. »
Ary araka ny teny filamatra napetraka ho amin’ity taona 2017 ity, manao hoe, « Fisandratana mirindra » dia ho taonan’ny asa mirindra entina hampandrosoana an’i Madagasikara sy hanatsarana ny fiainam-bahoaka ity taona ity. Ho taom-piotazana vokatra ny 2017 ary ho taonan’ny fidiram-bola ho an’ny ankohonana sy ho an’ny fitondram-panjakana ihany koa, araka ny fanambaran’ny Filoha hatrany. Asa be no miandry ary hotohizana sy hamafisana ireo ezaka efa natomboka toa ny asa teo amin’ny lafin’ny sosialy, fanabeazana, toe-karena, fizahan-tany sy ny maro hafa. Ao anatin’ny fialana ao anatin’ny fahasahiranana sy fahantrana izay hatrany, mampanantena asa maro ho an’ireo tanora ny fitondram-panjakana, izay tafiditra ao anatin’ny fisandratana mirindra entina hampandrosoana ny firenena. Tsy hijanona hatreo fa fantatra ihany koa fa hanampy ireo sehatra tsy miankina ny mpamatsy vola iraisam-pirenena izay ao anatin’ny fanampiana ny fitondram-panjakana hampandroso ny firenena malagasy hatrany. Hirariana noho izany fa tena ho taom-piotazam-bokatra tokoa ity taona vaovao ity.
Tsy nisy diso anjara tamin’ny Kits Scolaires nozarain’ny avy amin’ny fitondram-panjakana ny zanaky ny vahoaka malagasy. Nitohy tany Morondava indray izany, omaly. Ny Praiminisitra Mahafaly Olivier moa no nizara izany tamin’ny anaran’ny fitondram-panjakana. Taorian’izay dia ...Tohiny